UkuThathwa kweMfono yokuThengisa | Martech Zone
Iifowuni eziphathwayo bezikade zingafani nathi sonke, ukanti ngoku ziindawo eziqhelekileyo. Ii-Smartphones zihambele phambili kwaye zinonxibelelwano ngakumbi kunangaphambili, kwaye kusekho izinto ezintsha nezinomdla eziqhubekayo kwiinkampani ezininzi ezinkulu.
Xa kufikwa kuphawu lwentengiso kunye nentengiso kubalulekile ukwazi ukuba ungafikelela njani kubaphulaphuli abahambahambayo kunye nabasebenzisi beekhompyuter abazi kakuhle. Ukunyuka kwedijithali kuza nefayile ye- Ukutyhilwa kwe-infographic entsha ngendlela ebaluleke ngayo inethiwekhi ngokwenene kunjalo.
Ngaba uyazi ukuba baninzi abantu abasebenzisa iifowuni zabo ukufumana ii-imeyile kunabo basebenzisa i-PC yedesktop? Kwaye ukuba kukho ukuthengwa kwe-smartphone okungaphezulu konyaka kuneetafile, iilaptops kunye needesktops zidityanisiwe? Jonga apha ngezantsi ukufumanisa ngakumbi…
Ukunyuka kwedijithali yinkampani yokumakisha ekwi-intanethi egxile ekufumaneni umxholo kunye nolawulo lweendaba zosasazo, kunye noyilo lwewebhu kunye nophuhliso.
tags: Ibhokisi lemiyalezoukhangelo mobilezorhweboUkurhweba ngefowuniukuthengiswa kweecommerceimeyile ephathekayoI-inbox ephathekayourhwebo mobileIsicwangciso sentengiso esiphathwayomobile ekuhlaleniiselfowni xa ithelekiswa nedesktopUkhangelo lwewebhu leselulaSocial Media Marketing